Mogadishu Journal » Dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu xiray Canada
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu xiray Canada
Mjournal :-Ciidamada la dagaalanka hubka sharci darada ah ee dalka Canada ayaa shalay gelinkii dambe oo Arbaco aheyd waxa ay xireen ilaa 6 dhalinyaro oo asalkooda uu Soomaali yahay.
Dhalinyaradan oo looga shakisan yahay inay heysteen hub sharci daro ah ayaa waxaa laga soo xiray guri ku yaalla bartamaha magaalada Toronto, halkaasi oo ay ku noolaayeen.
“Booliska magaalada ayaa galay guri waxa ay ka soo qabteen 6 dhlinyro ah, waa wax fiican in ammaanka la sugo, bale hawlgaldan waxay u muuqdaan in keliya lagu beegsanayo dhalinyarada Soomaaliyeed.” Ayuu yiri Sadiiq Cali Xaashi oo ka mid ah dhalinyarada ku nool dalka Canada.
Saraakiil u hadashay Booliska Canada ayaa waxa ay sheegeen in ay baaritaan ku sameyn doonaan dhalinyaradan, hadii dambi ay yeeshaana la horgeyn doono sharciga.
Duqa Magaalada Toronto ayaa waxa uu sheegay habeenkii in ciidamo dheeraad ah la geyn doono xaafadaha magaalada, si loo yareeyo falalka ammaanka ka baxsan ee mararka qaar dhaca.